Know mara aha m, mana ọbụghị akụkọ m! | KONGOLISOLO
Site na: Admi1na: July 17, 2016 00: 20 Enweghị asịsa
Ị nụrụ banyere ihe m mere, ma ọ bụghị banyere ihe m nwetara
Ị maara ebe m nọ, ma ọ bụghị ebe m si bịa.
See na-ahụ ka m na-achị ọchị, mana onweghị ihe m maara n’ahụhụ m.
Kwụsị ikpe m ikpe. Ịmara aha m agaghị ama m.
Ọdịda nke Empires Africa
Ọkt29 04: 50